Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: dingan-dava am-pitandremana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: dingan-dava am-pitandremana
Maika ery ny mponina eo am-piandrasana ny fahafahana hampitombo ny fatram-bary arotsaka ao anaty vilany. Tranga voalohany antenainy ny fiantraikan’ny fahombiazan’ny pôlitika vaovao. Maika toy izany koa ny Filoha vaovao izay fantatra ny fitiavany ny hanatanteraka faran’izay haingana ny raharaha imasoany. Anefa moa ny tanjona apetrak’ilay tetika mifehy ny asa ankapobeny fantatra amin’ny anarana hoe IEM dia azo atao hoe hetsika lavitra ezaka ihany. Ka toy ny lalàn-javatra rehetra tsy tratra raha tsy eo ny ezaka, ny fihafiana sy ny faharetana. Tsy ny fitombon’ny fatram-bary ihany moa no tanjona fa ny fisondrotry ny fari-piainan’ny besinimaro, ny fitombon’ny fahafahana hividy kapaoka ambonin’izay mahazatra dia angamba kosa azo antenaina miandalana fa tsy hiandry aman-taonany.
Heno moa izao fa efa miainga any ny vary izay ho varotana amin’ny vidiny mirary. Santatra ambavarano ampy hampiainga fahatokisana ny fisian’ny fiovana. Na izany aza fomba filazana taratry ny fahasarotam-piainana ihany ny firesahana vary. Atao toy ny ohatra fotsiny, zavatra maro voakasiky ny fahalafosan’ny vidim-piainana no efa tsy zakan’ny mponina ianjadin’ny fahasahiranana, mila fitsinjovana maika ireo rakotry ny fijaliana. Fanamaivanana ny fahoriana ateraky ny fahantrana izany, vonjy maika ho an’ireo mizaka ny ngidin’ny fiainana tafahoatra, fanavotana tsy manala ny adidin’ny rehetra. Hafahafa noho izay moa ny tanjona, ary samy manana ny fanaovana ezaka araky ny tandrify azy. Toy izay efa voalaza ny filana ezaka sy ny fahendrena momban’ny fandeferana eo am-paharetana.
Volana vitsivitsy ao aorianan’ny fisantaran’ny fe-potoana maha eo amin’ny fitondrana azy dia misitraka ny fahalemem-pon’ny mponina ny Filohampirenena. Tsy fahaiza-miaina ny fahamaimaizana amin’ny fanehoana tsikera diso lasa aloha. Tsy ampy akory ny fotoana anaovany vavan’asa dia efa hisy sahady ve ny tranga ahafahana anomezan-tsiny ? Tsy hiandry masaka fotsiny koa ny olona, fa araky ny fanentanana dia samy efa manao ny ezaka tandrify azy. Ny fiovan’ny toe-tsaina no antoka amin’izany. Efa tazana ny fisian’ny fiovan-drivotra : ny fanomezam-boninahitra tamin’ny fanatrehan’ ireo filohampirenena telo mirahalahy teo aloha Andriamatoa isany Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lanonana Fandraisan’i Andry Rajoelina ny fahefana tampony dia milaza mazava fa madio ny rivotra ary tsy misy ny rahona manambana.